Shabeellaha Hoose oo noqday fagaare dagaal beeleed!!! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Marko – Mareeg.com: Qeybaha dowladda Soomaaliya ka maamusho gobolka Shabeellaha Hoose ayaa noqday fagaare ay kusoo laalaabtaan dagaallada beelaha, iyadoo arrintaaas ay ku fashilantay dowladda Soomaaliya.
Dagaalka ugu xun ayaa maalmahan dib uga qarxay deegaanada Shalaambood iyo Ceel-wareegow, kuwaasoo hoos yimaadda degmada Marko.
Dagaalka oo u dhaxeeya labo beeleed ayaa waxaa u kala safan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasoo ku dagaal gelaya hubka, gaadiidka iyo dharka ciidamada dowladdu leeyihiin.
Sidoo kale, waxdaa dagaalka ku lug leh oo aan qarsaneyn labo ka mid ah mas’uuliyiinta deegaanadaas, kuwaasoo kala matalaya labada beelood ee is-haya, waxeyna kala yihiin gudoomiyaha degmada Marko, Maxamed Cusmaan Yariisow iyo gudoomiyaha deegaanka Shalambood, Nuur Cusmaan Raage.
Labadan nin ayaa warbaahinta isu mariya eedeymo sheegaya in midba kan kale ku duulay, codadkooda wey maqashaa dowladda Soomaaliya, mana jiro wax ay ka qabatay, weliba waxaa la yaab laheyd in wasiirka gaaashaandhiga, misna ah ku simaha wasiirka Amniga Qaranka, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo ku ekeysay uu baaq jeediyey.
Muddo saddex maalmood gudahood ay laba jeer dagaallo ka dhaceen Shalaambood iyo Ceel-wareego, waxaana Shalay iyo Ceel-wareegow, waxaana halkaas lagu dilay 10 qof, waxaana ku dhaawacmay ilaa 20 kale oo ay ku jiraan dumar iyo carruur.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, C/qaadir Maxamed Nuur Siidii ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo AMISOM iney soo farageliyaan dagaalka markii 3-aad ka qarxay Shabeellaha Hoose.
Dagaalka u dhaxeeya labada beelood ee kala ah: Biimaal iyo Habar-gidir ayaa labo jeer oo hore dowladdu xallisay, hase ahaatee xalkaasi ma noqon mid waara, waxaana loo sabababeeyey iyadoo aan dowladdu badelin xubnihii dagaalka dhaliyey ee ay iyadu u magacaawday deegaanadaas.
Sidoo kale, waxaan xal laga gaarin muranka dhuleed ee halkaas ka jira oo beesha Biimaal sheeganeyso iney beesha kale muddo dheer xoog uga heystay dhul deegaan iyo mid beereed labadaba.
Siidii ayaa sheegay in dagaalka oo markii hore ku saleysnaa dhul bereed la isku heysto uu isku badelay dagaal siyaasadeed, wuxuuna ku taliyey in iunta goori goor tahay la farageliyo.
Dhanka Wanlaweyn, oo ka tirsan Shabeellaha Hoose, waxaa ka jira dhibaatooyin yara ka hooseeya dhanka Marko, waxaa mararka qaar ku dagaallama maleeshiyo beeleed ciidanka ku dhex jira oo isku qabsada isbaarooyin.
In beeluhu dagaallamaan waa wax ka dhici jiray Soomaaliya, si uun ayaana loo xallin jiray, waxaase wax lala yaabo ah in dowladda oo ciidankeedu dagaalka ku jiro ay ku gaabsato baaq xabad jooijn.
Itoobiya: Dagaalkii Casaa ee Warbaahinta oo dilaacay